Version 0.5.1 – Horumar Database
April 11, 2010 by dalabyo 2 Comments
Tani version cusub xalinayo dhibaato aad u weyn la turjumayay weedho muddo ka badan 255 characters. Isbeddelkan ma aha allabari xawaaraha, laakiin dhab ahaantii bilaa index a ganaax soco dhigma. By ka shaqeeya code database ah ee aan sidoo kale la helay hab lagu sameeyo plugin u dhakhso badan u qabtaan (inta badan marka caching Beebee waxaa loo isticmaalay ma) halkaas oo hadda aan koox badan oo su'aalo ah turjumaad in database soo galeen su'aal hal.
Cayayaanka yar la turjumaad tags textarea ayaa sidoo kale xalin naqo Timo.
Sida had iyo jeer – calankeena u feedbacks aad.